सिंहासन नक्शा को खेल | यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | मार्गदर्शकहरू, यात्रा
मध्ययुगीन काल्पनिक एक महान विधा हो जुन जादू र राजनैतिक षडयन्त्रदेखि रोमान्स रोमनस र साइन्स फिक्शनको टचबाट एकल कथामा समावेश गर्न सक्दछ। त्यहाँ उत्कृष्ट लेखकहरू छन् र यद्यपि त्यस्तो लोकप्रियता घट्दो समयहरू भए पनि, त्यहाँ अरू पनि छन् जहाँ यो पुस्तक बिक्रीमा सधैं अग्रणी रहन्छ र वेबमा चलचित्र वा उपन्यास वा कमिकहरू पनि हुन्छन्। के यो तपाईलाई परिचित लाग्दछ? सिंहासन को खेल?
निस्सन्देह, अन्तहीन पुस्तकहरूको श्रृंखलासँग यसको टेलिभिजनसँग समान सफलता छ जुन साहित्यिक र यसको अभिनेताहरू र यसमा फिल्माइएको सेटिंग्स प्रसिद्ध छ। युरोपमा टिभी श्रृंखलाबाट यी प्राकृतिक सेटिंग्सहरू छन्, त्यसोभए यस लेखमा उनीहरूको बारेमा कुरा गरौं। रमाइलो गरौं!
1 आयरल्यान्डमा थ्रोन्सको खेल
2 स्पेनमा सिंहासनको खेल
आयरल्यान्डमा थ्रोन्सको खेल
आयरल्यान्डमा खेल को थ्रोन्स नक्शा असंख्य छ किनकि यस टापुमा श्रृंखलाको सबैभन्दा प्राकृतिक स्थानहरू छन्। उत्तरी आयरल्याण्डमा हामी दश राम्रा स्थानहरू भेट्टायौं त्यसैले नोट लिनुहोस्:
टोलीमोर वन: यो ठाउँ काउन्टी डाउनमा छ र १ 1955 XNUMX मा राज्य पार्कको रूपमा स्थापित भएको थियो। यो शृंखलाको पहिलो सिजनमा देखा पर्दछ, यो त्यस्तो क्षेत्र हो जुन विन्टरफेल वरपर देखिन्छ जहाँ ब्वाँसोहरू बस्छन् जुन हाउस स्टार्कको प्रतीक हो।
Ballyntoy हार्बर: यो काउन्टी एन्ट्रिम तटवर्ती भाग हो र साइट नक्ससाघी पहाडको तल साँघुरो र गाह्रो सडकको अन्तमा छ। यो श्रृंखलाको दुई सीजनमा देखा पर्दछ, जब थेओन ग्रेवायजय लर्डपोस्ट हाबोरबोरमा फर्कन्छन्।
पोर्टस्वार्ट स्ट्रान्ड: यो राज्यद्वारा संरक्षित क्षेत्र हो जुन उत्तरी तटमा टुक्रिन्छ र यसमा देशको सबैभन्दा राम्रा समुद्र तटहरू छन् जसमा इनिशोभन र मुसेन्डेन मन्दिरको दृश्यहरू उत्कृष्ट चट्टानहरूमा छन्। यसले श्रृंखलाको पाँचौं मौसममा डोर्नेको तटलाई चित्रण गर्दछ, जब जेमी लान्निस्टरले आफ्नी बहिनीकी छोरी, मिर्सेलालाई कि's्ग लैन्डि toमा फर्काउनु पर्छ।
Binevenagh - Limavady: यो एक उच्च, सपाट भूभाग हो, पहाडमा समाप्त हुन्छ जुन म्यागलिगान प्रायद्वीपको माईलसम्म म्याण्डसम्म विस्तार गर्दछ डाउनहिल, बेलारैना, कास्टलरॉक र बेनोनका गाउँहरूसँग। यो सेटिंग हो जहाँ डेनिरस टार्गेरिनलाई उनको ड्र्यागन, ड्रोगन, मौसम पाँचमा उद्धार गर्छिन्।
गाढा हेजेज - स्ट्रानोकम: कुनै श doubt्का बिना यो ल्यान्डस्केप आज सबैभन्दा लोकप्रिय आइरिश पोष्टकार्ड मध्ये एक हो। मार्ग अनौंठो छ, बीचको रूखहरूको एवेन्यू जुन स्टुअर्ट परिवारले १ residence औं शताब्दीमा उनीहरूको निवास स्थानमा चिन्ह लगाउन रोपेको थियो अझै हेर्न लायकको छ। सीजन २ मा श्रृंखलामा देखा पर्दछ, यो किंगड्रोस हो।
डाउनहिल बीच: यो काउन्टी लन्डोन्डरीको एक सुन्दर समुद्र तट हो, उत्तरी आयरल्यान्डको उत्तरमा समुद्री तट हो जुन सात माईल लामो छ र हिँड्न र खेलहरू खेल्नको लागि आदर्श हो। मास्डेन मन्दिर माथि छ र टिभी श्रृंखलाहरूमा यो दुई मौसममा देखा पर्दछ जब स्टानिस बाराथियोनले वेस्टेरोसका सात देवताहरूलाई अस्वीकार गरे र मेलिसेन्ड्रेलाई ज्योतिका देवतालाई बलिदानको रूपमा उनीहरूको पुतलाहरू जलाउन अनुमति दिए।
महल वार्ड: यो महल काउन्टी डाउनमा छ र १ Ward औं शताब्दीदेखि वार्ड परिवारमा छ। यो हवेली, तथापि, १ XNUMX औं शताब्दीको हो, र यो एक सुन्दर पहाडमा उभिएको छ जुन तालको वरिपरि पहाड र वन र बगैंचा सहित विस्तृत र हरियो क्षेत्रले घेरिएको छ। यो हाउस स्टार्क, विन्टरफेलको घर हो।
कुसेन्डुन गुफाहरू: तिनीहरू काउन्टी एन्ट्रीममा छन्, कुसनन्दुन गाउँ नजिक, डुन् नदीको मुखमा एक समुद्र तटमा। गुफाहरू गाउँबाट नै पैदलमा पुग्न सकिन्छ र श्रृंखलामा तिनीहरू सिजन २ मा देखा पर्दछ, यो त्यो स्थान हो जहाँ मेलिसान्ड्रेले त्यो पापी प्राणीलाई जन्म दिन्छ।
पोलनाग्लोम गुफा, मार्बल आर्च गुफाहरू: तिनीहरू काउन्टी फर्मानागमा छन् र पूर्व बेलमोर वनको हिस्सा हो। सबै कुरा मार्बल आर्च गुफाहरू ग्लोबल जियोपार्क भित्र छ। झरनाले गुफा खान्छ र त्यहाँ सबै चीजको मूल्यांकन गर्न पर्यटक ट्रेल हुन्छ। गुफा seasonतुमा देखा पर्दछ किनकि यो बेरिक डोन्डेरियन लुकाउने साइट हो।
ईन्च अबी: यो पुरानो चर्च काउन्टी डाउनमा छ र यो भग्नावशेष सिस्टेरियन अर्डरको सम्पत्ति हो जुन ११1180 मा कोइइल नदीको किनारमा स्थापना भएको थियो। गेम अफ थ्रोन्समा यो ठाउँ हो जुन रोब स्टार्कले आफ्नो शिविर स्थापित गर्न छनौट गरे।
स्पेनमा सिंहासनको खेल
स्पेन यस लोकप्रिय HBO श्रृ film्खलाको फिल्मांकनका लागि सबैभन्दा प्राकृतिक दृश्यहरूको साथ युरोपियन देशहरूको रूपमा देखा पर्दछ। उत्पादनले पाँचौं सिजनमा आफ्नो हेराईहरू पुन: संगठित गर्ने र यसलाई इबेरियन प्रायद्वीपमा राख्ने निर्णय गर्यो तिनीहरू धेरै सफल थिए त्यसैले निम्न सिजनहरूमा उनीहरू फर्के।
रोमन ब्रिज: कर्डोबाको रोमन पुल, आंशिक रूपमा थ्रीडीमा एनिमेटेड, यो पुल हो जुन मौसम five मा भोलान्टिस शहरको हो र टायरियन र भ्यारीस यस भित्र छिर्दा पार गर्ने एउटा पूल हो। यो एकै समयमा लामो ब्रिज, पुल र बजार हो। थ्रीडी एनिमेसन चीज चाखलाग्दो थियो किनकि दृश्यहरू स्टुडियो र बकग्राउन्डमा फिल्माइएको थियो र कम्प्युटरको साथ ब्रिज थपिएको थियो।
Almodovar डेल रियो महल: मौसममा सात कर्डोबा दृश्यमा फर्किन्छ जब शहरबाट केवल kilometers० किलोमिटर टाढा कास्टिलो अल्मोडोवार डेल रियो कासा टायरेलको निवासस्थलमा प्रयोग भइरहेको थियो।
सेभिलको वास्तविक अल्काजार: यो हाउस मार्टेलको निवास हुन्छ र मौसम five मा हामी यसको सुन्दर बगैंचा देख्छौं जब ट्रसिटाने टायरेल र मायर्सेला बाराथियोन खेल्छन्।
मारिया डि प्याडिलाको नुहाउने ठाउँ: यो स्थान हो जहाँ बालुवा सर्पहरु आफ्नो बुबा Oberyn मा आफ्नो बदला संगठित।
राजदूत कोठा: यस सिजनको एपिसोड नौमा यो कोठा हो जहाँ प्रिन्स डोरानले जैमेलाई ग्रहण गर्छन्। यो राम्रो कोठा हो।
तपाइँ पर्यटक भ्रमणको क्रममा वास्तविक Alcázar का यी परिदृश्यहरू जान्नुहुन्छ र तपाइँ त्यहाँ धेरै सजीलोसँग पुग्नुहुन्छ: T1 ट्रामलाई पुर्टा डे जेरेजमा लैजानुहोस् वा बसहरू ०,, A05, A3 र A4 Men Pendez Pelayo तल जाँदै छ।
Girona मा स्थानहरु
Girona सडकहरू: ती मौसम six भरमा धेरै नै प्रयोग भएको थियो र उदाहरणका लागि, अन्या वाफबाट उडेर गएको सडकहरू वा जब म गीरोनाको जाकिन हगर शहरमा हिंड्छु: यो ब्रावुसको सिजन छ मा हुन्छ र किंग लन्डि ofको दृश्य अन्तमा। ।
कैथेड्रल गिरोना बाट: यो Baelor को महान सेप्टे हो जुन Cersei Lannister हवामा उडेर जान्छ।
जुराट्सको प्लेट: यो वर्ग मौसम in मा देखा पर्दछ जब अन्या एक सडक थियेटर हेर्न जान्छन्।
Cceceres मा स्थानहरू
Trujillo महल: यो मौसम सातमा क्यास्टरली रक छ।
पुरानो सहर: डुब्रोभनिक पछि धेरै राजाका लागि किंग लैन्डिing हुन्छ। उही कबाल्ड सडकहरू, उही ढु stone्गाका पर्खालहरू, उही मध्यकालीन दृश्यहरू। Cceceres सामान्यतया मौसम सात मा एक नयाँ स्थान को रूप मा देखा पर्दछ।
Almería मा स्थानहरू:
अल्मेराको अल्काजाबा: यो शानदार सुदृढीकरण कासा मार्तेल को निवास को रूप मा सेभिल को रियल Alcázar संग दृश्यहरु साझा।
काबो डि गाटा पार्क र टोरे डि मेसा रोल्डन: तिनीहरू मीरेनको केहि दृश्यहरू फिल्म गर्नका लागि छनौट गरिएका थिए, उदाहरणका लागि सीजन six को एपिसोड in मा जब डेनरीसले मास्टर्सलाई सजाय दिन्छन्।
Almería को परिदृश्य: अल्मेरियाको मरुभूमि परिदृश्य दोथ्राकी ज wild्गल, सुक्खा, को पुनरुत्पादन गर्न आदर्श भएको छ।
कास्टेलन, पेनिस्कोलामा स्थानहरू
कास्टेलोनको प्रान्तमा पेनिस्कोला हो, जुन श्रृंखलामा throughoutौं मौसममा यसको आउटडोर सेटिंग्सको लागि मीरिनको रूपमा काम गर्‍यो।
आर्टिलरी पार्क: यो स्थान हो जहाँ टायरियन, ग्रे वर्म र मिसनडेले एस्टापोर र युन्काईको मास्टरको बारेमा छलफल गर्छन्।
पोर्ट फस्कोस: रेड पुजारीले उच्च भल्यारिआनमा जनतालाई प्रचार गर्ने ठाउँ यही हो।
मुख्य मार्ग: यो त्यो गल्ली हो जहाँ भेरीस र टायरियन हिड्छ र रणनीतिहरूको अनुसरण गर्न छलफल गर्दछ।
बास्क कन्ट्रीमा स्थानहरू
सत्र सातमा स्पेनको यस क्षेत्रमा पार्कहरू छन्। उदाहरण को लागी, Gaztelugatxe यो बर्मियोको एउटा सानो प्रायद्वीप हो जुन त्यस मौसममा डेगनसको जन्म भएको ड्रेगनस्टोनको ज्वालामुखी टापु प्रतिनिधित्व गर्दछ।
पालैपालो, पुल जसले टापुलाई मुख्य भूमिसँग जोड्दछ त्यो मौसममा बारम्बार देखा पर्दछ। को Itzurun समुद्र तट, Zumaia मा, यो पनि अन्य समयमा ड्र्यागनस्टोन बन्छ।
अन्तमा हामी सूचीबाट बाहिर जान सक्दैनौं Zafra महल, बाह्रौं शताब्दी देखि, गुआडालाजारा मा Campillo डी डुएनास मा। यो आनन्दको टावर हो। महल जारागोजाबाट १ 149 kilometers किलोमिटर टाढा छ। न त सान्ता फ्लोरेन्टीनाको महल, क्यानेट डे मारमा, क्याटालोनियामा। शृंखलामा यो सामवेल टार्लीको पैतृक घर हो। महल बार्सिलोना र गिरोना बीच छ, दुबै शहरबाट एक घण्टा भन्दा कम दूरीमा।
स्पष्ट रूपमा, HBO श्रृंखला यूरोप मा अन्य धेरै देशहरु मा शट तर यो धेरै लामो लेख सम्मिलित हुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » यात्रा » मार्गदर्शकहरू » सिंहासन नक्शा को खेल